Makambani anoshandisa social network uye akabudirira | ECommerce nhau
Makambani anoshandisa social network
Sezvo pasocial network zvakabuda, pakave nevazhinji vanoedza kuvashandisa kuti vawane vateereri vakawanda. Ivo vese vanoda yavo manhamba eneti kuve akakwirira, kuti kuve nekudyidzana kwakawanda nevashandisi uye, pamusoro pezvose, kuti izvi zvitaurwe mukutengesa kwechigadzirwa. Asi zvinosuwisa havazi vese vanobudirira. Zvisinei, pane makambani anoshandisa vezvenhau nenzira kwayo.
Muchokwadi, kune mamwe makesi emakambani akabudirira kuvonga kwavari. Saka nhasi tichave tichishanda uye tichikuudza nezvezviitiko zvemakambani anoshandisa masocial network kubatana nevateereri vavo uye, uyezve, vanobudirira. Iwe unoda kuziva kuti ungazviita sei kune yako eCommerce?
1 Nei uchibheja pamasocial network mune yako eCommerce
2 Makambani anoshandisa social network uye akabudirira
2.1 Ford, yemakambani anoshandisa masocial network kubatana
2.3 Kenay Kumba
2.6 Qwertee, emakambani anoshandisa netiweki kuwana kudyidzana
Nei uchibheja pamasocial network mune yako eCommerce
Paunotanga bhizinesi repamhepo, chinhu chakajairika ndechekuti iwe unoda kuve mune ese saiti pawebhu. Pawebsite yako, paFacebook, paTwitter, pa Instagram, paPinterest… Uye hongu, zvakanaka, asi unokanganisa. Uye chakakomba kwazvo: shandisa iwo iwo meseji kune ese masocial network.
Ngatitorei muenzaniso. Une munhu anokuteera paFacebook, Instagram uye Linkedin. Uye iwe unonyorera iwo iwo meseji kumatatu ese network Zvese zvakaenzana. Saka munhu iyeye anogona kufunga kuti kupusa kukutevera pane ese matatu, sezvaunomuputira neshoko rakafanana. Uri kuitei? Regedza kukutevera nepakati.
Zvino ngatiise imwe nyaya. Iwe une matatu aya network, asi yega yega ine rakasiyana meseji mune zvinyorwa uye nemufananidzo. Iwe haufunge here kuti chero anokutevera achada kuziva zvawakaisa mune dzimwe nzvimbo? Nekuti zvichave zvakasiyana, nekuti mune imwe iwe unogona kuisa makwikwi, mune imwe bhuku rakajairika, mune imwe joke ...
Iyi ndeimwe yemakanganiso akajairika, sekuvhura blog uye kuteedzera zvinyorwa zvevamwe zve peji rako. Kunze kweGoogle kukuranga iwe, uri kuba basa uye izvo hazvina kunaka kune yako brand.
Asi vachitarisa pasocial media, ivo vakakosha nekuti ndipo pane vateereri vako. Vanhu vazhinji vanowanikwa zvirinani kuburikidza nesocial network nekuti unovhura nzira dzekutaurirana navo. Zvino, chinhu chakakosha kuziva kuti ungabatana sei. Uye kune izvo, iyo mienzaniso yemakambani anoshandisa social network zvinobudirira anogona kukupa nhungamiro. Tinovaona here?
Makambani anoshandisa social network uye akabudirira
Kufunga nezve makambani anoshandisa pasocial network kunogona kuve nyika. Anenge makambani ese nhasi anoashandisa. Asi kumira mukati mawo uye kuti ivo vanokuziva iwe kuburikidza neaya masocial network hakuna akawanda kudaro. Muchokwadi, heino mimwe mienzaniso yacho.
Ford, yemakambani anoshandisa masocial network kubatana
Ford ndeimwe yemienzaniso yekutanga yatinogona kukupa iwe yemakambani anoshandisa vezvenhau nemazvo. Uye yaive piyona mukupa chavanodaidza kuti "Ford Zvemagariro". Iyo yakasarudzika chiteshi uko vanhu vanogona kupa mazano kwavari kuti vafunge uye nekuvandudza zvirongwa zvinogara zviripo.
Iyi inzira yekubatanidza vashandisi vako mune chimwe chinhu chavanogona kuita.
Iyi kambani ine zita rekunze iri chiSpanish. Iyo mhando yemagirazi akagadzirwa muAlicante ayo akwanisa kugadzirisa iyo eCommerce yenyika. Uye akazviita kuburikidza nesocial network. Chii chakaita? Zvakanaka akaisa mari a yakawanda mari muFacebook Ads kushambadza uye kusvika kune anotarisirwa mutengi. Uye zvakare, akawana kubatana kwevakakurumbira avo vakatora mifananidzo nemagirazi avo uye izvo zvakatendera vazhinji kuti vade kutevedzera avo vanozivikanwa, vachitenga chigadzirwa chimwe chete.
Nekupa zvigadzirwa zvinodhura kune vatengi, kutengesa kwavo kwakakwira zvakanyanya. Uye kudyidzana kwavo kuburikidza nehukama hwehukama zvakare kuri kugara.
Ndiani anoti makambani haakwanise kubudirira kuburikidza nesocial media? Mune ino kesi, Kenay Kumba akakunda pa Instagram. Izvo zvaakaita kuratidza mapikicha ane hunhu hunhu uye hunokwezva kwazvo, izvo zvakagadzira vashandisi vachakumbira fenicha uye kushongedza. Uye zvechokwadi, havana kusiya mibvunzo iyoyo isina kupindurwa, izvo zvaibvumira vatengi kuti vanzwe sekunge vaitenga muchitoro chemuviri, achivepo nguva dzese.
Chero Coca-Cola post inogara iine zviuru zvekuda nekudyidzana. Uye anozviita nekuti ivo vanoshandisa manzwiro uye manzwiro nemifananidzo uye mavhidhiyo akatumirwa.
Zvinyorwa zvake hazvisi zvinoyemurika senge zviwanikwa zviviri izvi, uye ndosaka vanhu vachivatevera. Rangarira kuti dzakawanda zvekushambadzira kweCoca-Cola paterevhizheni zvakarova zvakanyanya, uye wakave nemamwe mazano achiri kurangarirwa (senge kuti Coca-Cola ndeye munhu wese, yeakakwira, akaderera…).
Iyi kambani yeorenji yaifunga kuti vanogona kutengesa zvigadzirwa zvavo paInternet. Uye zvechokwadi, zvakatanga semunhu chero upi zvake, achida kuve pane ese masocial network. Asi gore rekutanga rakanga risina kunaka. Nekudaro, ivo vakaona kuti paTwitter vaive nekudyidzana kwakawanda, uye zvavakatumira zvaishanda zvirinani pane mamwe manetwork, saka ivo vanobheja pazviri uye Vakaona kuti tarisiro yavo vateereri yaive yakawanda paTwitter pane kune mamwe maratidziro Uye zvakare, ivo vakapa zvakakosha zvemukati, uye nekudyidzana nevateveri.
Zvairevei? Kuti ivo vakatanga kubudirira uye ikozvino kutengeswa kwemaorenji kuburikidza nemambure kuri nani zvikuru kupfuura iwo egore rekutanga iro.
Qwertee, emakambani anoshandisa netiweki kuwana kudyidzana
Iyi t-shirt kambani haina kunyatso kuzivikanwa muSpain, kana pamwe inyaya yekuti inopa akawanda mabhajeti pane t-shirts (pa4-5 uye 6 euros). Chinhu chakanaka ndechekuti dhizaini yavo ndeyepakutanga, hauzovaone paT-shirts pano. Uye ivo vane mhando yakanaka kwazvo.
Ivo vanoshandisa pasocial media kuunza iwo magadzirirwo padhuze pamwechete, uye kuwana kudyidzana kubva kumativi ese epasi. Uye sezvo vachitakura kwese kwese, pamusoro pemitengo inodhura kwazvo, ivo vari kubudirira pasirese.
Mune ino kesi, iyi kambani yakashandisa Facebook kukwezva vatengi. Uye akadaro kupa macode ekuderedzwa pasocial network, nenzira yekuti vakapa mubayiro kuvanhu vaivatevera. Nekudaro, yakakura, asi zvakare yakawana kudyidzana nevashandisi vayo, nenzira yekuti zvaiita sekunge urikugadzira hurukuro munguva chaiyo, nekuda kwekuti ivo vaiziva kwazvo.
Iye zvino, ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzekudyara hamburger muSpain uye inotevera mutemo wayo wekupa vatengi zvinopihwa uye zvidzoreso zvavanoshandisa mumaresitorendi ayo. Nekuti, kwavari, chinokunda kutarisisa uye basa remhando yepamusoro, kunyangwe paine zvaderedzwa.
Kune mamwe makambani akawanda anoshandisa vezvenhau zvinobudirira. Iwe unogona here kutitaurira nyaya yeumwe wavo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zvekutengeserana zvemagariro » Makambani anoshandisa social network
Sei dermatologist yave ecommerce